परदेशको खाडीमा श्रीमान ,नेपालमा श्रीमती गर्भवती !! कसको बच्चा भनेर सोध्दा आयो नसोचेको जवाफ सबै परे चकित, हेर्नुहोस भिडियो – Enepali Samchar
परदेशको खाडीमा श्रीमान ,नेपालमा श्रीमती गर्भवती !! कसको बच्चा भनेर सोध्दा आयो नसोचेको जवाफ सबै परे चकित, हेर्नुहोस भिडियो
May 9, 2021 May 9, 2021 adminLeaveaComment on परदेशको खाडीमा श्रीमान ,नेपालमा श्रीमती गर्भवती !! कसको बच्चा भनेर सोध्दा आयो नसोचेको जवाफ सबै परे चकित, हेर्नुहोस भिडियो
e nepalisamchaar // काठमाडौं । विश्वमा हरेक दिन नयाँ र अनौठा घ’टनाहरु भइरहेका हुन्छन् । अहिले बाहिर आएको समाचार भारत बिहार राज्यको हो । जगदीशपुर पुलिस क्षेत्र यहाँ छ । यहाँ एक महिला गर्भवती हुने बित्तिकै बबाल भएको छ । महिलाको नन्द यस सम्बन्धमा डीआईजी पुगेकी थिईन् । अब तपाई सोच्दै हुनुहुन्छ, के भयो ?वास्तवमा, गर्भवती महिलाको पाँच वर्ष पहिले विवाह भएको थियो ।
कुरा यहीं समाप्त भएन । परिवारका सदस्यले महिलालाई साथमा राख्न अस्वीकार गरेपछि पञ्चायत बसे । त्यहाँकी महिलाले भनिन् कि बच्चा उसको पतिको हो । उनका पति सपनाहरुमा आउँथे। र यही कारणले गर्दा उनी गर्भवती भइन् ।पञ्चायतको समयमा महिलाको फोन पनि जाँचिएको थियो । उनको फोनमा केटाको नम्बर फेला पर्यो । त्यसपछि पोल खोलियो कि यो बच्चा त्यो केटोको हो, र यी महिला उसँग सम्बन्धमा छन् ।******** भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोस********
कारण के हुन सक्ला? के हामी भोतिक रुपमा मात्र गरिब छौ? यी प्रश्नहरु आज हाम्रो समाजले आत्म समालोचना गर्नको लागी सोध्नु पर्ने भएकोछ।प्राकृतिक सम्पदाको दृष्टिले हेर्ने हो भने हाम्रा पुर्बजहरूले हामीलाई सम्हाल्न सक्ने भन्दा बढी सम्पती दिएर गएका छन्। हाम्रो तराइले हामी सबैलाई प्रसस्त खुवाएरबङगलादेशमा निर्यात गर्न सक्ने खाद्य पदार्थ उत्पादन गर्न सक्छ
तर हामी खेतिको ज्ञानबाट बंचित छौ र गरीब छौ। हाम्रा पहाडका नदीनालाहरु, सारा देशलाई उज्यालो पारेर, सबलाई खाना पकाई खुबाएर, घरघरमा यातायात पुगाएर, हरेक घरमा आधुनिक मशिनहरु चलाइ दिएर, भारतबाट बिदेशी मन्द्रा आर्जन गर्न सक्ने क्षमताबान छन; तर हामीसंग
म सँग जापान जानको लागि इमान्दार केटा चाहियो ! इच्छा हुनेले तुरुन्तै सम्पर्क गर्नुहोला (पुरा जानकारी हेर्नुहोस)
यी बहादुर असई जसले मन्त्रीकै गाडी समाइदिए बिना पास मन्त्री नै भए पनि छोड्दिन भन्दै यसरी जंगिए (भिडियो सहित हेर्नुहोस)